Posted by Santosh Bhagat on Sunday, November 8, 2015
Posted by Sudeep Acharya on Saturday, November 7, 2015
होइन नयाँ संबिधानमा त जम्मा २५ जना मात्र मन्त्री रहने भनेर लेखेको छ, के यो सरकारले संबिधान नै उर्लंघन गरेको हो त ? यसो प्रतिक्रिया पाऊ न है साथीहरु !
Posted by Maan Rokaya on Monday, November 9, 2015
अघिल्लो साता भएको वीरगञ्ज घटनाप्रति सरकारले माफी नमानेसम्म वार्तामा नजाने मोर्चाले बताएको छ । मोर्चाको वार्ता टोली सदस्य...
Posted by Seva Chandy on Sunday, November 8, 2015
Posted by Vijay Kumar Sah on Sunday, November 8, 2015
The clash between the Madheshis and the Hill elites isaclash of two nationalities.
Posted by Sarita Giri on Sunday, November 8, 2015
मन्त्री ज्यू समाधान गर्नुहोस् - खोक्रो राष्ट्रियता देखाई जनतालाई नअल्मलाउनुहोस्। तपाईँलाई समाधान गर्न पठाएको हो जनताले। पालेका पनि छौँ। ढुंगे युगमा होईन संमृद्ध युगमा जान मन छ हरेक नेपालीलाई।
Posted by Ujwal Thapa on Monday, November 9, 2015
मधेसी मोर्चाले आइतबार यसरी गर्‍यो संसद अवरुद्ध ।
Posted by eKantipur on Sunday, November 8, 2015
सबै पत्रकारहरुलाई निमन्त्रन : काथमान्दु को आखा बात मधेस हेर्नेहारु एक चोती गौरमा आउनुस कती को सन्ख्या मधेस आन्दोलन हुँदैछ, अनि हेर्नुस ।
विप्लव माओवादीले भारतीय ट्रक जलाइदियोhttp://www.ratopati.com/news/12887/
The current state of media affairs in Nepal reminds me what Malcolm X once wrote: "If you're not careful, the newspaper...
Posted by Kanchan Jha on Monday, November 9, 2015
नाकाबन्दी गराउनमा यो डोभलको पनी पक्कै ठुलो रोल छ, सुन्छु पाकिस्तान पनी यो संग सतर्क हुन्छ रे। तर खुल्ने भयो भनेर खुशी भै...
Posted by Prasanna Parajuli on Sunday, November 8, 2015
Posted by Sachin Shah Uyfm on Sunday, November 8, 2015
Great move! But, what had stopped the commission to take such move weeks before?
Posted by Prakash Bom on Sunday, November 8, 2015
Posted by C.k. Sah on Sunday, November 8, 2015
Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 9, 2015
मन्त्रीहरुको भनाईलाई भटाभट खण्डन गर्ने भारतीय दूतावास ओलीको बोलीमा चुप - See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/12831/
Nepal - sad & true. The old guard used the earthquake to entrench itself in power viaadiscriminatory constitution.
Posted by Manjushree Thapa on Monday, November 9, 2015
एमाले मा एउटा नि बुध्ही भएका मधेशी छैनन ? भएका हरु लाई पाउ पुजा मै ब्यस्त राखिने चलन छ । मधेश आन्दोलित हुँदा त समबेशिता को अवस्था यस्तो छ , अरु बेला क गर्दा होलान ?
Let us find Nepal's Prashant Kishor and buildateam under him/her. Let us bring Nepal's Ivy Leaguers back to Nepal from...
बालाजु, काथमान्दु का जनता गैसको लागी पुलिस बात कुताइ खाए ।मधेसका जनता अधिकारका लागी । आखिर दुख त हामी सर्वसाधारन नै हुन्छ ।
Posted by Rajesh Ahiraj on Sunday, November 8, 2015